५०%ले पूँजी वृद्धि गरेको हिमालयन डिष्टिलरीको नाफा ९२% बढ्यो
कात्तिक २९, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेडले रू. १८ करोड ७४ लाख ६८ हजार खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको यसै अवधिसम्म रू. ९ करोड ७५ लाख ५५ हजार थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीका नाफा ९२ प्रतिशत बढी भएको हो ।
गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको सञ्चालन नाफा करीब ७८ प्रतिशत बढी भएको छ । गत वर्ष यस अवधिमा रू. १४ करोड ८७ लाख ९४ हजार सञ्चालन नाफा गरेको कम्पनीले यो वर्ष रू. २६ करोड ४८ लाख ११ हजार सञ्चालन नाफा गरेको छ ।
वस्तु विक्रीबाट कम्पनीको आम्दानी गत वर्षभन्दा यस वर्ष ५५ दशमलव ९५ प्रतिशत बढेको छ । गत वर्ष रू. ४० करोड ६१ लाख ३९ हजार बस्तु विक्रीबाट आम्दानी गरेको यस कम्पनीले यो वर्ष रू. ६३ करोड ३३ लाख ६८ हजार आम्दानी गरेको छ ।
५० प्रतिशत बोनस शेयरमार्फत कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ५७ करोड ८४ लाख ६८ हजार पुगेको छ । कम्पनीको जगेडा कोष रकम गत वर्ष रू. ७० करोड २५ लाख ३० हजार रहेकोमा यस वर्ष २२ दशमलव ८० प्रतिशत बढेर रू. ८६ करोड २७ लाख ३८ हजार कायम भएको छ ।
नाफा ९२ प्रतिशतले बढाएको यस कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी पनि गत वर्षभन्दा बढी भएको छ । गत वर्ष रू. १०१ दशमलव १९ रहेको प्रतिशेयर आम्दानी यस वर्ष रू. १२९ दशमलव ६३ पुगेको हो । त्यस्तै गत वर्ष रू. २८२ दशमलव १७ रहेको प्रतिशेयर नेटवर्थ यस वर्ष घटेर रू. २४९ दशमलव १४ मा झरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म यस कम्पनीको कुल सम्पत्ति रू. २ अर्ब ३ करोडभन्दा बढी छ । यो रकम गत वर्षको यस अवधिसम्म रू. १ अर्ब ५९ करोड २२ लाख ८२ हजार थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको कुल सम्पत्ति बढेको छ ।
स्वाबलम्बन लघुवित्तको स्वतन्त्र सञ्चालकको पदावधि समाप्त[२०७७ मंसिर, १६]